I-china shaction-evacuation access sheath yokusetshenziswa okukodwa kwefektri nabakhiqizi | I-Kangyuan
• Xazulula izinkinga zokuhamba kwetshe le-uric nokubuyela emuva ngokuphelele, Ngaphansi kwengcindezi engemihle, ingagwema ukubuyela emuva kwetshe, ivimbele ukuhamba kwetshe futhi lisuse itshe ngempumelelo.
•Xazulula izinkinga zokuhamba kwetshe le-uric nokubuyela emuva ngokuphelele, Ngaphansi kwengcindezi engemihle, ingagwema ukubuyela emuva kwetshe, ivimbele ukuhamba kwetshe futhi lisuse itshe ngempumelelo.
•Nciphisa umfutho ophakeme wesikhumba se-renal ngempumelelo, Ukunisela okuqhubekayo kusadonsa, kungakha ukusakazwa okungamanzi okuphazanyisiwe ukunciphisa ukucindezela okuphezulu kwe-renal pelvis ngempumelelo.
•Kungavimbela ukopha ukugcina umbono ocacile ngesikhathi senqubo yokusebenza. Ngaphansi kokunisela okuqhubekayo nokumunca, ingahlanza ubomvu, ihlwili legazi futhi ivele ngaphandle, igcine ukusebenza kwenziwa ngombono ocacile, iqinisekise ukuphepha kokuhlinzwa, futhi ifinyeze isikhathi sokusebenza.
•Nweba ukuqina kokufinyelela kwe-ureteral ngempumelelo ukuqinisekisa ukuthi ukusebenza kwenziwa ngokushelela, Umklamo we-dilator tapered nge-AQ hydrophilic camera unganweba ukuqina kokufinyelela kwe-ureteral ngempumelelo.
•Ithiphu yomgodla ne-dilator yi-AQ hydrophilic camera. I-hydrophilic coating ubukhulu balo mkhiqizo yi-0.03mm kuphela. I-COF yisilinganiso esingu-0.050 ngokuhlolwa okuphindiwe kwe-frithion. Umphumela ungaphezulu kakhulu kwemikhiqizo efanayo.
•Iphaseji yokumunca ingcindezi engemihle ingaxhunywa ngepayipi lomoya elincelisayo lokudonsa umoya noma ipayipi lokufaka umoya elihlanganisiwe.
•Ipulaki lokufaka uphawu lwe-Silicone, kulula ukusebenza.
•Kuyinto elula futhi elula ukuhlanganisa ukuhlangana komgogodla tube kanye ngokuhlanganyela ukunwetshwa tube ndawonye.
•Ingcindezi engemihle elawula imbobo, lungisa ngempumelelo ingcindezi yokudonsa.
•Umzimba weshubhu umakwe ngezikali, umbala ucacile futhi uyahlukaniswa. Kungasiza udokotela ukwahlulela ibanga eliphakathi komgodla kanye nomchamo ngendlela eqonde ngqo nelula.
•Ubuso bomzimba weshubhu bumbozwe nge-AQ enamathela nge-hydrophilic, ebushelelezi, ukungqubuzana incane, inani elijwayelekile le-friction force COF ingu-0.050, futhi kulula ukukhulisa i-lumen ngokusebenzisa ingxenye encane, ukunciphisa ukulimala nokungenabuhlungu.
•Xhuma ne-tube yokwandisa ngokushelela.
•Ithiphu yomgodla ubushelelezi ukugwema ukulimala kwe-urethral.
•Ithiphu ye-dilator yi-AQ hydrophilic camera. Idizayini ithiphu le-taper. Ingakhula kancane kancane ngokusebenzisa ukungqubuzana nokukhishwa ekwakheni iziteshi zokuhlinza eziphelele futhi ezijwayelekile, kulula ukusebenzisa i-ureteroscope eguquguqukayo, ivikele i-ureter ngesikhathi sokushintshana kwezinsimbi eziphindaphindiwe ngesikhathi se-ureteroscopy.
Langaphambilini Ipayipi Lokumunca
Olandelayo: Abicah isisu Tube
ukuncipha kokufinyelela emgodleni
I-Laryngeal Mask Airway eqinisiwe
Alahlwayo Urethral Catheterization Kit
ILaryngeal Mask Airway ne-Epiglottis Bar